Fiheverana voalohany momba ny iOS 8 amin'ny iPad | Vaovao IPhone
Raha taorian'ny antony fito nomeko anao andro vitsivitsy lasa izay tsy nametrahanao ny beta voalohany an'ny iOS 8, rehefa avy nametraka azy aho, noho ny adidy ara-moraly hampahafantatra ny mpamaky anay, Azoko atao ny manamarina fa mbola tsy hevitra tsara ny fametrahana azy. Betsaka amin'ireo fiasa vaovao izay nambaran'izy ireo no azo alaina ao amin'ny kinova ho an'ny iPhone, fa tsy ho an'ny iPad.
Mba hametrahana ny beta voalohany an'ny iOS 8 dia nampiasa iPad Mini aho (tsy misy retina). Milamina ny fiasan'ny fitaovana, saingy mihitsoka tsindraindray izy rehefa manoratra amin'ny fampiharana sasany.
9 Fizarana fianakaviana
10 ny hafa
Mikasika ny vaovao lehibe, raha misy aminareo nametraka ny beta amin'ny iPhone dia hamarininareo izany misy ny kitendry misy sosokevitra, izay tsy izay no olana amin'ny iPad. Rehefa manokatra ny rindranasa Pejy izahay hanoratra antontan-taratasy dia hitantsika fa ny bara ambony izay apetraka ambony latabatra dia misondrotra ny andalana voalohany misy litera.
Fampiasana iray hafa izay tsy misy koa, satria be ny beta mivoaka, tokony ampiasan'izy ireo izany, ny asan'ny Spotlight amin'ny internet. Ao amin'ny beta 1 izao, Tsy mijery afa-tsy amin'ny fitaovana fotsiny ny spotlight. Ao anatin'ny fikirakirana, tsy afaka misy lafiny samihafa izahay ka raha ataonao izany.
Ao anatin'ny efitrano raha mahita ny vaovao Time-Lapse sy ny timer isika izay azontsika apetraka amin'ny 3 na 10 segondra. Ny Time Lapse dia tsy manana safidy fikirakirana, noho izany tsy azo atao ny mahafantatra hoe impiry no nakana ny sary, fa azontsika ampiasaina izany.
Hafa amin'ireo fiasa izay, amin'izao fotoana izao, Tsy misy ihany koa izy io, ny fahalalana an'i Siri antsika foana, Hey Siri. Tahaka ny Google Now, rehefa miresaka amin'ny mpanampy isika, miditra amin'ny fomba tsy tapaka (amin'ny alàlan'ny fihazonana ny bokotra fanombohana) dia hita eo amin'ny efijery ny lahatsoratray izay didinay.
Ny lafiny vaovao amin'ny multitasking, miaraka amin'ny sarin'ireo fifandraisana nifandraisantsika tato ho ato, dia miasa tsy misy olana lehibe, afaka miantso FaceTime, mandefa hafatra.
The browser Safari raha manana ny vaovao nambara tao amin'ny WWDC ianao notontosaina ny alatsinainy lasa teo, izay ahitantsika ny fahitana kely an'ireo pejy nosokafanay sy ny tsanganana mitete eo ankavanana izay hidirantsika amin'ireo tiana, lisitra famakiana ary fizarana.
Inside ny App Photos, raha nahita izahay ary miasa tanteraka ny fandaminana vaovao ny sivana sy ny loko ary ny toerana misy azy. Ny fiasa vaovao hanitsiana ny sary indraindray dia miseho, toy ny amin'ny mazika, fa amin'ny ankamaroan'ny fotoana dia tsy izany. Ny fikarohana amin'ny toerana, taona sy fotoana dia miara-miasa amin'ilay tranga indraindray, saingy miaro tena izy.
Ny zava-baovao lehibe toy ny fitsaboana ireo mailaka hanamarihana azy ho vakiana amin'ny alàlan'ny famindrana ny mailaka ao anaty lovia ankavanana sy ny famafana azy mivantana amin'ny alàlan'ny famindrana ny mailaka ao anaty lovia ho amin'ny ankavia miasa tanteraka izy ireo.
Ny fiasa vaovao an'ny horonan-taratasy ny varavarankely mailaka manoratra izahay mba hanamarina ny mailaka hafa miasa tsara. Ny safidy vaovao koa hanampiana ny fifandraisana amin'ny fandaharam-potoanan'ny mailaka izay tsy notehirizintsika, tamin'ny alàlan'ny famantarana hita eo an-tampon'izy ireo.
Ity zava-baovao nampahafantarin'i Apple tao amin'ny iOS 8 ity, ary araka ny efa nolazaiko dia hevitra tena tsara, miasa tsy misy tranga, ary koa mora ampiasaina. Ny zavatra voalohany tokony hataonay dia ny manamafy ny antsipirian'ny kaontinay miaraka amin'ny carte de crédit, satria izahay no mpikarakara ny vondrona. Aorian'izay isika dia afaka manampy ny fianakavianay mivantana na mandefa fanasana ho azy ireo hanatevin-daharana ilay vondrona. Isaky ny misy olona te-hividy, ny mpikarakara dia handray hafatra izay hampahafantarina azy ireo ary hahafahany hanaiky ny fividianana na handà izany.
Ny famantarana ny fifandraisana tsy misy tariby mandihiza mihoatra ny sombin-trondro ao am-bavan'ny anti-panahy. Ny tsipika famantarana indraindray dia ampidinina amin'ny fikasihana nefa tsy very izany ary sitrana vetivety, nefa tsy namindra ilay fitaovana.
Toy ny mahazatra ao amin'ny kinova beta, ilay fitaovana Matetika haverina indray izy io, tsy imbetsaka amin'izao fotoana izao, ary ny rindranasa tohanana amin'izao fotoana izao dia mety hiala tampoka. Mikasika ny mifanentana amin'ireo rindranasa napetrako dia misy ny rindranasa toa ny Drive izay tsy misy fomba hanokafana azy ireo, satria andramako fa mihidy tampoka izy io. Ny hafa toa an'i Chrome, miasa amin'ny fahasahiranana fa ny fampifanarahana ny tsoratadidy dia tsy mandeha tsara. Ny Apple Pejy, Isa, fampiharana iMovie ... dia tsy manome olana amin'ireo iOS vaovao, afa-tsy ny klavier izay nolazaiko teo ihany. Ny fangatahana milalao horonantsary toy ny VLC dia tsy manome olana ihany koa.
Tsy mandeha tsara ny AirDrop. Raha mizara amin'ny iPad tonga lafatra, fa raha mandray rakitra dia tsy mandeha izany. Raha toa ka mahazo sary dia mampahafantatra antsika ny iPad fa mandray sary izy. Rehefa manjavona dia manomboka misokatra sy mikatona ny fampiharana Photos toy izao imbetsaka, mandra-pahazo fa reraka. Rehefa reraka dia ho hitantsika fa efa imbetsaka no raisina amin'ny iPad ny sary.
Amin'izao fotoana izao dia izao ihany. Raha te hahafantatra zavatra bebe kokoa momba ny beta voalohany amin'ny iOS 8 ianao, aza misalasala mamela izany amin'ny hevitrao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Fiheverana voalohany momba ny iOS 8 amin'ny iPad
Ios maharikoriko dia hoy izy:
Mahagaga, endri-tsary maharikoriko inona, fako inona
Apple milentika bebe kokoa isan'andro isan'andro noho i jonathan ive ilay mpankafy conchita wurst lehibe indrindra
Mamaly ny rikoriko ios
Farany! Andro hafa dia nitaraina marina aho fa tsy misy olona hamoaka na inona na inona momba ny Ipad izay misy koa. Mitadiava bilaogy na forum ahafahanao maneho hevitra momba ny ios8 amin'ny ipad miaraka amin'ny olona maro kokoa izay nanana izany fa tsy nahita na inona na inona momba izany aho.
Ny zava-nitranga dia gaga aho rehefa nametraka azy io fa zavatra maro no tsy hita, toy ny Fahasalamana, indrindra satria tsy nisy nahatsikaritra hoe tsy misy izy ireo, ka tsy haiko raha toa ka ampian'izy ireo amin'ny beta ho avy na izany dia ho fampiharana manokana an'ny iphone toy ny sasany. Tamin'ny ios7 dia nitranga fa ny iPhone no nivoaka voalohany ho an'ny iPhone azoko tsara fa ny zavatra lojika dia ny mampitandrina azy, Na izany na tsy izany ny fandidiana amin'ny ankapobeny (ho beta) dia gaga aho, naoty roa monja momba ny hevitrao.
Siri - Raha miasa ny fihainoana mavitrika dia tsy maintsy mandeha any amin'ny toerana misy anao ianao - siri. ary milaza hoe "Hey Siri"
Kitendry - Amin'ny fampiharana na fotoana sasantsasany (messenger Facebook) raha mivoaka tsara ny klavier ary miaraka amin'ireo safidy vaovao rehetra hanoroana teny sns, (rehefa mampiasa ny iphone keyboard ianao)
Misaotra ireo naoty, fa ny asan'ny Siri, na dia afaka aza, dia tsy mamaly ahy.
Mikasika ny klavier dia nanam-bintana ihany koa ianao, satria tsy vitako ny nampiseho azy io tamin'ny fampiharana nataoko ary nanandrana maromaro aho.
IPad inona no anananao? Nampiasa iPad Mini aho raha tsy nisy ny efijery retina, araka ny nambarako tao amin'ny andalana voalohany amin'ilay lahatsoratra
Angamba ilay maodely tsy haiko, ny safidin'i Siri dia hita ao amin'ny toerana "Fampiatoana ny feo" (Hey Siri)? Ary ny klavier araka ny nolazaiko anao dia rehefa mampiasa ny iphone keyboard ny rafitra satria tsy ipad app izany. Ny maodeliko dia ny Ipad4 A1460
Ny safidy "hey Siri" dia ao anaty setting, saingy tsy mandeha izy io, na dia amin'ny iPhone aza.
Nanandrana iPad aho tamin'ny efijery retina gen faha-3 ary raha mandeha ny safidy "hey siri", inona no mitranga fa ny iDevice dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ny outlet na port USB.